MC Hammer 2.0 sy marika manokana | Martech Zone
Alatsinainy Oktobra 26, 2009 Alarobia, Febroary 10, 2016 Douglas Karr
Raha te hikaroka olo-malaza afaka nanatanjaka ny asan'izy ireo tamin'ny alàlan'ny media sosialy ianao dia i MC Hammer no ohatra voalohany nataoko. Ny olona rehetra dia nahita ny ambadiky ny mozika ary nitsangana sy nianjera tamin'ny MC Hammer ho toy ny pop icon.
MC Hammer dia nahomby ampiasaina ara-tsosialy haino aman-jery hampiditra azy indray amin'ny kolotsaina maoderina. Raha nisalasala nihaino ianao… aza. Olona sariaka sy manan-tsaina ary manetry tena izy - tonga lafatra amin'ny haino aman-jery sosialy.
Raha ny voalaza dia azonao atao ny mamaky ny nivoahany ho media sosialy ao amin'i Dan Schawbel's Gazety manokana momba ny marika.
Navelan'i Dan hanoratra lahatsoratra ho an'ity fanontana ity koa aho, noho izany dia feno fankasitrahana aho ary tena mankasitraka anao manamarina izany. Raha mbola tsy amidy ianao dia makà santionany amin'ity volana ity. Ny marika manokana dia ampahany lehibe amin'ny fananana fisian'ny media sosialy. Raisiko am-pitandremana ny persona an-tserasera… miantoka fa mifanaraka amiko manokana io ary mijanona ho fitaomana tsara amin'ny media sosialy sy bilaogy.
Raha mbola tsy nieritreritra be momba ny marika manokana ianao dia raiso ity kopia ity ary antenaiko fa ny lahatsoratro dia hahatonga anao handray ny dingana voalohany! Raha MC Hammer ary Douglas Karr tsy ampy, ho hitanao ihany koa ny dinidinika miaraka aminao Kerry Rhodes, fiarovana, The New York Jets; Patrick Lencioni, Mpanoratra be mpividy NY Times, Ny Dysfunction dimy an'ny ekipa; Steve Rubel, SVP, Edelman Digital; John Jantsch, bilaogera, dianaholstein.com; ary Mitch Joel, Mpanoratra, Pixel enim-pisarahana.
Tags: dan schawbelJohn Jantschkerry rhodesmc martinamitch joelpatrick lencionimarika manokanamagazine marika manokanasteve rubel
Aiza no misy ny serasera mailaka?
26 Okt 2009 amin'ny 7:20 PM
Misaotra ny fanohanan Andriamatoa Karr 🙂